KAABASHKA SAVOY: SAWIR, DARYEEL, BEERASHADA DHULKA U FURAN EE ABUURKA IYO TALOOYIN MARKA AY IYAGA KU BEERI ON GEEDO, IYO SIDOO KALE SHARAXAAD OF NOOCYO. OO AY KU JIRAAN MELISSA IYO WERTH - BEER CAGAARAN
Noocyada sii kordhaya kaabajka Savoy ee bannaanka u furan - talooyin ku saabsan daryeelka iyo dhaqanka sawir
Kaabashka Savoy waa beer dalag, mid ka mid ah qaybaha badan ee qoyska kaabash. Waxaa iska leh kooxda kala duwan ee Sabuada. Waqooyiga Afrika iyo qaybta galbeed ee Badda Mediterranean waxaa loo tixgeliyaa inay tahay Waddanka reer warshadda hooyada ee Savoy. Waxaa loo caleemo saaray gobolka Savoie, taasoo ahayd sababta magaceeda oo kale ah.
Kaabashka Savoy waa qaraabo dhow ee kaabajka cad, laakiin wax yar ayay ka duwan tahay dhadhanka qaraabada. Waddankayaga, noocyada noocaan ah laguma dhex beerin meel walba, si qalad ah u soo jeedinaya in ay aad u baahan tahay marka la eego daryeelka.
Waxyaabaha ugu xiisaha leh waa in aad kori kartaa subxyada this kaabaj xataa xitaa bartamaha Russia.
Seeds of kaabajka digoy karaa Gagaab karo heerkul ah ee 360 ​​digrii, iyo dhaxan si degan u wareejinta -7.
Waxaa habboon in la ogaado in heerkulka hooseeya ee warshad inta lagu jiro xilliga koritaanka uu leeyahay saameyn togan - waxay noqotaa mid tayo fiican leh.
Tixgeli arimaha ay tahay in aad dareenka siiso markaad koreyso:
sifooyinka ciidda ee beerto;
Ciidda beeritaanka dalagga waa inay lahaadaan bacrimin sare.. Waa in la kobciyaa macdanta iyo bacrimiyayaasha organic, gaar ahaan haddii loo qorsheeyay in ay beeri hore iyo gebi ahaanba Bisaylkiisa dhirta.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocan ah ee kaabajka ah uu leeyahay iska caabin adag oo ka timaada yaraanta qoyaanka, dhaqanka qaangaarka ayaa u baahan qadar ku filan oo biyo ah. Haddii kale, caleemuhu waxay noqon doonaan kuwo adag oo aan lahayn casiir leh. Sida geedo, iyaga oo badanaa u waraabiyo maahan muhiim.
Wixii kaabajka ah si ay u soo baxaan, waa ku filan si ay u abuuraan xaaladaha lagama maarmaanka ah.. Si ka duwan sida dhaqanka cad, miraha abuuri karaa si fiican heerkul ah 16-18 digrii.
Si ay geedo si fiican u degaan dhulka, waa ku filan in ciidda kulaalaa -4 digrii, for noocyo Bisaylkiisa hore ilaa -2.
Kaabashka Savoy wuxuu u qaybsan yahay saddex nooc: hore, bartamaha-Bisaylkiisa iyo goor dambe. Ka mid ah noocyada hore, kuwan soo socda ayaa cadeeyay qiimaha:
Horaantii magaalada Vienna - darajo heer sare ah leh caleemo qotodheer. Madaxiisu waa cagaar madow, oo wareegsan, miisaankeedu yahay 1 kg iyo mid dhexdhexaad ah. Waxay leedahay dhadhan fiican.
Hore bilowga - Sare sare leh, oo heer sare ah leh madaxyada 800 garaam. Madaxa wuxuu u adkeysanayaa inuu ku jajabiyo lakabyo badan oo cufan leh oo ah midab madow. Beergooyinku waxay bilaabaan inay bixiyaan 110 maalmood laga bilaabo wakhtiga beereedka.
Compars - Isku dhafka hore ee gogolka ah ee soo baxa maalinta 80aad. Kala duwanaanshuhu waa mid muhiim u ah ciladda iyo cayayaanka. Madaxda iftiinka cagaaran-cagaaran ma jajabaan waxayna leeyihiin dhadhan weyn.
Annaga 2170 - warshad Bisaylkiisa ah, laakiin madaxyadiisu way jajabi karaan marka ay u baxaan. Beergoosku wuxuu bixiyaa 90 maalmood. Madaxa miisaankeedu yahay 800 garaam iyo cufnaanta dhexdhexaadka ah, oo leh caleemo yar yar.
Petrovna - fasalka hore ee bislaaday, cawska loo dhigo 110 maalmood, madaxyada kaabajka oo culeyskiisu yahay 1 kg, iftiin jaalaha ah oo gooyay.
Cabbiraadyo xilliga kuleylka ah ee la yareeyey oo leh madaxyo waaweyn oo ka mid ah kaabajka iyo dhalidda sare. Si ka duwan sida hoose ee ugu hooseeya, waxaa lagu kaydin karaa oo loo isticmaali karaa qallalan muddo dheer:
Twirl 1340 - kala duwan bartamihii xilli-ciyaareedka oo leh madaxyo madax oo miisaankoodu yahay ilaa 2.5 kg. Cufnaanta waxay ku xiran tahay waxqabadka beeraha waxay noqon kartaa mid fiican ama celcelis ahaan. Leaves waxaa ku jira bubbly oo leh yaraansho yar. Aad dhadhan fiican leh, laakiin aad ayay u xumayd.
Crom - kala duwan bartamihii bartamihii, oo leh kaabajar cufan oo culeyskiisu yahay 2 kg, jirida yar yar, ka baxo dalool.
Sphere - darajo heer sare ah oo leh madaxyada 2.5 kg oo leh cufnaanta celceliska. Madaxda ha kuulin, adigoo dhadhan fiican leh.
Melissa - Beelaha ugu wanaagsan ee kaabajka digo, kaas oo siinayaa goosashada 80 maalmood. Muuqaalka kala duwan ee noocyada kala duwan waxaa loo tixgelin karaa in ay yihiin madaxyo waaweyn oo kaabajka ah, miisaankoodu wuxuu gaari karaa ilaa 4 kg, halka aanay ku dillaacin waxayna u adkeysan karaan fusarium.
Noocyada ugu dambeeya ee kaabajka savoy leeyihiin tayada ilaalinta wanaagsan oo dhadhan:
Stilon - goor dambe, kala duwan oo u dhaxeysa iska caabiya, awood u leh inay u adkeeyaan dhaxan hoos u-6 digrii, halka madaxyada 2.5 kg luminayaan dhadhanka.
Ovasa - Beeluhu waxay ku kala duwan yihiin in uu leeyahay caleemo waaweyn. Miisaanka madaxa cufan ee kaabajka wuxuu gaaraa ilaa 2.5 kg.
Nadia - madaxa ah ee noocyo kaabajka ah ma qabadsiiyo oo aan ku xirnayn fusarium. Harvest waxay helayaan maalinta 140aad, waa cabbitaan culus oo culeyskiisu yahay 3 kg. caleemaha waa jilicsan oo jilicsan.
Uralochka - Beelaha kulaylka u adkaysta oo leh madaxyo wareeg ah, oo miisaamaya 2.5 kg. Caleemaha kaabajka ah iyada oo aan xidid midab khafiif ah-cagaaran.
Dareeraha xarkaha - Madaxda noocyada kala duwan waxay kortaan ilaa laba kiilo garaam, halka ay leeyihiin dhar guduudan iyo dhadhan fiican.
Waxaa haboon in la ogaado in kaabash Savoy waa mid aad u iftiimaya-u baahan, waayo, goosashada wanaagsan, waxay u baahan tahay maalin iftiin 13-saac.
Sida loo doorto noocyo kala duwan oo ka mid ah kaabajka digo ah ee beeritaanka on site ah?
Wax kasta waxay ku xiran tahay baahiyaha, haddii aad doorbidayso inaad isticmaasho kaabajka salad, cusub, waxay ka fiican tahay inaad siiso doorbididda noocyo hore u bislaaday iyo Beelaha oo leh muddooyinka Bisaylka dhexdhexaad ah. Haddii aad rabto in aad u hoydo jiilaalka ama qajaar la, ka dibna ku beeri noocyo dambe soo saara.
Dooro noocyo kala duwan oo beerto ah oo ku saleysan doorashooyinka shakhsi ahaaneed iyo baahidooda.
Markaas waxaad arki kartaa sawirrada noocyo kala duwan ee kaabajka digoy.
Tiknoolajiyada sii kordhaya kaabajka Savoy ka soo abuurka ku dhowaad la mid ah habka koritaanka kaabajka cad.
Waxa ugu muhiimsan ee caleemaha dhalinyarada waa wakhti waraabinta.. Haddii aad raacdo tilmaamaha, waxaad heli kartaa geedo wanaagsan, iyo mustaqbalka - goosashada qani ku ah.
Waxaad ka iibsan kartaa miraha kaabajka digoyinka dukaanka khaaska ah ama waxaad ku qori kartaa internetka.
Kharashka hal bac ah waa qiyaastii 40 rubi. Kala duwanaanshaha waa in la doortaa iyada oo ku saleysan baahidaada iyo dhadhanka aad dooratid.
Tilmaamaha geedo sii kordhaya
Waxay dhan ku xiran tahay kala duwan ee kaabajka digoy. Badanaa muddada laga bilaabo abuurista beerista waa 30-50 maalmood. Tusaale ahaan, noocyo hore ayaa lagu beeray geedo xilligaas laga bilaabo 5 ilaa 10 Maarso, kadibna laga bilaabo 10 ilaa 20 Maarso.
Haddii Kaabashka lagu beeray si toos ah dhulka, ka dibna dooro dhexe ee April for beerto, ku beeran filimka. Taariikhaha ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada ee gobolka sii kordhaya.
Si aad u koraan dalag wanaagsan oo kaabajka ah, aad u baahan tahay in la ogaado bayoolaji. Waxaa la fahamsan yahay in Kaabashka kaabajka ah, ma cabsanayo dhaxan, si fiican u kori karaa carrada qoyan, laakiin waa mid aad u dalbanaya bacriminta ciidda.
Ciidda beeritaanka waa inay ahaataa 80% peat, jilicsan, laakiin aan aad u dabacsanayn. Sidoo kale waa mid ku habboon in lagu daro 5% oo ah ciid iyo dhirta dhulka. Ashes ayaa lagu daraa walxo kiilo kasta oo carrada ah, waxay u adeegi doontaa oo kaliya bacriminta, laakiin sidoo kale sida ilaalinta lugta madow.
Haddii uu jiro cudur ama cayayaanka dhulka, ka dibna waa ka fiicnaan inaad diiddo inaad ciidda soo ururiso, tan iyo geedaha noocyada kala duwan ay yihiin kuwo aad u nugul cudurradan.
Ka hor inta aadan beerin abuurka waa in uu qaataa waxqabadyada tababarka. Beeraha abuurka ee ciidda waa inay bilaabaan jeermiska.. Seeds of kaabash Savoy waxaa lagu daaweeyaa biyo kulul +50 digrii, ka yar bacda leh wax beerto 15 daqiiqo, ka dibna hoos biyo ah qabow 2 daqiiqo. Ka dibna miraha waa in la qalajiyaa oo lagu hayaa qaboojiyaha ilaa 24 saacadood. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad mar kale qalajiso.
Nidaamkani ma aha oo kaliya inuu dilo dhammaan cudurrada laga yaabo in ay ku yaalaan dusha, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​biqilka degdegga ah. Waxaa mudan in la ogaado in alaab-qeybiyeyaasha la isku halleyn karo ee wax-soo-saarkan beertu ay qaadaan daaweynta abuurka ah ee qiyaasta warshadaha, ka hor intaan la iibin.
Sidoo kale, ka hor intaan la beeriin, waxaad kordhin kartaa caabbinta barafka ee abuurka, iyaga oo biyo ku qulqulaya 24 saacadood, heerkulka biyaha ee kiiskan waa inuu u dhigmaa +2 digrii.
Haddii aad ka iibsatay miraha midab aan caadi ahayn dukaanka, tani macnaheedu waa inay horay u maraan dhammaan tallaabooyinka wax qabadka.
Isku dar ah ciidda loogu talagalay beeritaanka abuur waa in lagu waraabiyo xal xooggan oo ah kiniinka potassium. Waxay lagama maarmaan u tahay jeermiska.
Beerta qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay ku filan tahay si loogu diyaariyo ciidda si haboon, geedi socodka abuurka, iyo geedo ayaa soo bixi doona weyn. Laakiin ma aha.
Beerista digirta badbaadada ayaa u baahan in si aad ah loo wajaho, habka kaliya ee lagu heli karo kaabajka ku habboon nooca lagu sharaxay bacda. Sidaas awgeed:
Waxyaabaha laga beerto waxaa la dhigayaa ciidda saddex waji, fasax u dhexeeya 4 maalmood;
miraha waxaa loo dhigaa qoto dheer oo ah 1 cm, koobiyo gaar ah ama sanduuq loogu talagalay geedo;
dhulku waa daadanayaa, ka hor iyo ka dibba beeridda;
ka dib muuqaalka of caleemaha ugu horeeya, waraabinta waa la yareeyey ilaa dhexdhexaad ah.
Sidee loo wareejiyaa dhul furan?
Qaybinta abuurka ayaa koray, wakhtiguna wuxuu u yimid inuu ku wareejiyo geedo si uu uqaybqaato, tani waa qiimo la ogaanayo qaar ka mid ah sifooyinka soo kordhaya noocyada kala duwan ee beerta.
Geedo ayaa la geeyaa dhulka Maajo (waqtiga ayaa laga yaabaa inuu u guuro, oo ku salaysan xaaladaha cimilada). Si fiican u beeray fiidkii, ama maalinti buuqan. Waxaa haboon in la xusuusto taas haddii geedo aan gaarin 15 cm dhererka, waxaa fiican in ay u koraan, tan iyo dhirta waa inay leeyihiin ugu yaraan 4-7 caleemo run ah.
Ka dib markii geedo waxaa loo wareejiyey meel joogto ah, beerista Kaabashka waa in waraabinta saxda ah iyo joogto ah, kaas oo lagu fuliyaa sida soo socota:
maalmaha ugu horreeya ka dib markaad tallaalka qaadatid, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto 8 litir hal wareeg oo labajibbaaran laba maalmood;
ka dibna waraabinta waa in la dhimo ilaa 1 jeer toddobaadkii, 13 litir oo labajibbaar ah;
ciidda waa inay noqotaa dabacsan, waa in la sameeyaa maalin walba 8 cm oo qoto dheer.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay in la ogaado in kaabash Savoy waa in muddo gaaban spud - markii ugu horeysay 20 maalmood ka dib laga beerto, ka dibna 10 maalmood oo kasta.
Hilling ugu horeeya waxaa lagu fuliyaa iyada oo la maro dhaymo leh dareeraha dabiiciga ahDoodwanaagka ugu habboon.
Kaabashka Savoy waxaa ku dhaca cudurro isku mid ah oo dhan kuwa jilicsan:
garaac madow oo madow;
xagta oo bararsan;
masaakiin iyo beddelaad kale.
Inta badan kaabash Savoy waxaa laga adkaaday Alternaria iyo lugta madow. Si loo ilaaliyo dalagyada khudradda ka soo baxa, waa lagama maarmaan in la soo saaro walxaha beerto, ilaalinta xeerarka beeraha, isla markiiba nadiifinta aagga laga soo saaro cawska iyo ka saar harta miraha.
Waxaan bixinaa si aan wax uga ogaano faa'idooyinka iyo khatarta khudradda aan caadiga ahayn. Waxyaabo gaar ah waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo wax ku oolsan oo ku saabsan kiimikada, calaamadaha iyo iska horimaadyada isticmaalka kaabajka digo ee carruurta, ragga iyo dumarka.
Waxaa habboon in la xuso in technology leh beeraha saxda ah, waxaad kori kartaa goosashada wanaagsan ee kaabajka digoy, xitaa aagga dhexe ee dalkeena. Haddii aad ku beeran noocyo goor dambe-Bisaylkiisa, ka dibna xitaa xilliga qaboobaha waxaa jiri doona cusub, kaabash Savoy ka on miiskaaga.